विदेश बाट फर्किएका हवाई यात्रु क्वारेन्टाइन बस्नको लागी तोकियो ७८ होटल; मूल्य कति?
जेठ १९- सरकारले विदेश बाट फर्कने नेपालीहरुलाई राख्नको लागी ७८ ओटा होटललाई क्वारेन्टाइनको रुपमा सुचिकृत गरेको छ! विदेश बाट फर्किएका नागरिकलाई सिधै घर पठाउँदा समुदाय स्तरमा को’रोना माहामारी फैलन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विदेश बाट नेपाल फर्कनेहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने नियम बनाएको छ ! सरकारले खाडीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्कनेलाई ५ दिन र अन्य अवस्थामा फर्कने नेपाली र विदेशी नागरिकलाई १० दिन होटल बुकिङको प्रमाण देखाएपछि मात्र नेपाल आउन अनुमति दिने नियम बनाएको छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङका अनुसार कम्तीमा २० वटा कोठा भएको होटललाई क्वारेन्टिनका रुपमा तोकिएको हो । विभागले आज जारि गरेको गरेको सूचीमा रहेका होटललाई यात्रुले प्लेन टिकट काट्दा नै क्वारेन्टिनका लागि बुक गर्नुपर्ने छ । विभागले यसअघि भारतबाट आउने यात्रुलाई राख्न तोकेका १० होटलमा अन्य ६८ वटा थप गर्दै ७८ वटाको नाम क्वारेन्टिन होटलको रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । ठमेल, सुन्धारा, कलंकी क्षेत्रका होटललाई भने क्वारेन्टिन नबनाउने निर्णय गरिएको छ । हाल नेपालले पहिलो चरणमा टर्की, कतार, चीन र भारतमा नियमित हवाई उडान सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सरकारले सांग्रिला, होटल र्‍याडिसन, होटल याक एण्ड यती, हायात रिजेन्सी, सोल्टी, अलफ्ट होटल र एभरेष्ट होटल गरी ७ वटा पाँचतारे होटललाई क्वारेन्टिन रुपमा तोकेको छ । यि होटलहरुमा २५ भन्दा बढी कोठा क्वारेन्टाइनको रुपमा संचालन गर्न व्यवसायीहरु सहमत भएका छन् ! त्यस्तै चारतारे स्तरका होटल शंकर र होटल हिमालयसमेत क्वारेन्टिन होटलमा सूचीकृत भएका छन् । तीनतारे स्तरका समिट होटल, अमादब्लम होटल, साम्बाला होटल, ले हिमालय, होटल प्लाटिनम, होटल ट्रेडिसनल कम्फर्ट र होटल ल्याण्डमार्कमा समेत यात्रुले क्वारेन्टिन बस्न सक्ने छन् । यो संगै यसबाहेक पर्यटनस्तरका ५१ होटल र दुई रिसोर्ट पनि क्वारेन्टिन सूचीमा समावेश छन् । रिसोर्टमा बुढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट समावेश छ । पर्यटकस्तरीय होटेलमा धुलिखेल लज रिसोर्टलाई यो सूचिमा राखिएको छ ।
चिन, कतार, टर्की र भारत बाट नेपाल प्रवेश गर्नेले अनिवार्य रुपमा होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम बनाएपछि खाडीमा कार्यरत श्रमिकहरुमा होटलको खर्च के कति हुने हो भन्ने कुराको चिन्ता देखिएको छ ! ३०-४० हजारमा मजदुरी गर्ने मजदुरले महँगो होटलको खर्च कसरी धान्न सक्छन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ! आज पर्यटन विभागले क्वारेन्टाइनको रुपमा सुचिकृत गरेका तारे होटलहरुले मूल्य आफै तोक्नेछन भने अन्य होटलहरुको मूल्य दैनिक ३००० तोकिएको छ!
सरकारले तोकेको होटलहरुको नामलिस्ट